အခမဲ့များအတွက် DroidMote လိုင်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » DroidMote လိုင်း
DroidMote လိုင်း APK ကို
သင့်ရဲ့အိပ်ရာ၏နှစ်သိမ့်ကနေသင့်ရဲ့ Android, Windows သို့မဟုတ် Linux ကို device ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဒါက client ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးအခြားစက်ကိရိယာကိုထိန်းချုပ်ဘို့သင့်ကို Android device ကိုအပေါ်ကို install နိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, DroidMote အတူသငျသညျကိုပင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင် (ဥပမာတစ်တီဗီ!) မရှိကြပါဘူးကြောင်းကိရိယာများပေါ်တွင်, ရှိသမျှပေါင်းစုံထိတွေ့ applications များနှင့်ဂိမ်းများကိုသုံးနိုင်သည်။
သငျသညျဆာဗာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု install လုပ်နိုင်ပါတယ်တစ်ဦးဝေးလံသော device ကိုထိန်းချုပ်ရန်။ - DroidMote ဆာဗာ -
Quick Start Guide: goo.gl/9pTzS
Windows နှင့် Linux တို့အတွက်အခမဲ့ DroidMote ဆာဗာ၏ download ။ x86 x64 လက်မောင်း: goo.gl/TroJaH
DroidMote က Android, Windows နှင့် Linux ကို OS ကိုအတွက်အမှန်တကယ်ရိုက်သွင်းရေးကိရိယာများ emulates ။ mouse, ကီးဘုတ်, Multi touch နဲ့ trackpad, ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကိုလည်းသင်၏အ client ကိုကိရိယာ၏ accelerometer ကိုအသုံးပြု 16 ခလုတ်နှင့်6ဝင်ရိုးနှင့်အတူတစ်ဦး Gamepad ။ သင်တို့သည်လည်းသူတို့သည် Gamepad2Touch လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်ထိတွေ့ profile များကိုများ၏အကူအညီ၏သီလအတွက် built-in Controller ကိုထောက်ခံမှုမပါဘဲ, ဆာဗာကိုစက်ပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ဂိမ်းအားလုံးနှင့်အတူဆော့ကစားရန်အပျော့ဂိမ်းဆော့ခလုတ်ဒါမှမဟုတ် client ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးတစ်ဦးဟာ့ဒ်ဝဲဂိမ်းဆော့ခလုတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ တကယ့် Gamepad ကိုထောက်ပံ့သောဂိမ်းများအမှန်တကယ် device ကိုအဖြစ် DroidMote အသိအမှတ်ပြုရန်။ သင်တစ်ဦးသည် router မရှိပြဿနာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးပါ။ သင်က function ကိုချိတ်တွဲ / သင့်ကိရိယာ၏ခရီးဆောင်ဟော့စပေါ့နှင့်အတူနှစ်ခု devices များအကြားညွှန်ပြနေတဲ့ connection ကိုအမှတ်တည်ထောင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ (သင်, ဘလူးတုသ်မလိုအပ်ပါဘူးဟာဘလူးတုသ်နှေးကွေးနေသည်နှင့်သေးငယ်တဲ့အကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်း)
[။ ] မောက်
[။ ] Multi touch နဲ့ Trackpad
[။ ] လက်ချောင်းနှစ်ချောင်း Scroll လှည့်မှန်ဘီလူး
[။ ] Keyboard ကို
[။ ] Mediaplayer
[။ ] Dpad
[။ ] Multi touch နဲ့ဂိမ်းဆော့ခလုတ်
ထို့အပြင် accelerometer ဒေတာနှင့်အတူ [။ ] Multi ဝင်ရိုး Joystick တို့
[။ ] တစ်ပြိုင်နက်မျိုးစုံဖုန်းများထောက်ပံ့ပေးသည်။
[။ ] နှစ်ဦးကို virtual Analog စချောင်းကို
[။ ] Touch ကိုအတုယူသင်မျက်နှာပြင်မှခလုတ်နဲ့ Analog တုတ် map ခွင့်ပြုပါတယ်။ ပင်သူတို့အား built-in Controller ကိုထောက်ခံမှုမပါဘဲ, အပြည့်အဝ Analog စထောက်ခံမှုနှင့်အတူအားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်း Play!
အမှန်တကယ် mouse ကိုထောကျပံ့မဂိမ်းများကိုများအတွက် [။ ] TouchMouse
[။ ] Voice ကိုသတ်ပုံ
android ဖုန်း 4.2 ကီးဘုတ်နဲ့တက်ရိုက် [။ ] လက်ဟန်
[။ ] DroidMote ဆာဗာဖို့ဟာ့ဒ်ဝဲ Controller command များကို redirect ပြန်ညွှန်းဝှက်ခု
အန်းဒရွိုက်လိုအပ်သည်: 2.1 နှင့်တက်
AirMirror: Remote ...
ရေဘဝဲ - Play ...